आर्थिक अभावका कारण बालकको उपचार हुनसकेन
admin, ११ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०८ प्रकाशित
भदाै ११ िवहिवार ,
प्युठान, जिल्ला अस्पताल विजुवार प्युठानको अन्तरंग बिभागको बेड नं.२ मा एक दुई बर्षिय बालक अचेत अबस्थामा पल्टिरहेका छन्। हातमा सलाइ्र्रन झुण्डाईएको छ। क्याथेटरको माध्यमबाट पिसाव निकालिएको छ। न त उनलाई खाने थाहा छ , न त कुनै प्रतिक्रिया जनाउँछन। ४ दिन अगाडि अस्पताल लिएर आएकी आमा विहिबार बिहान २ बजे देखि सम्पर्क विहिन भएकी छन्।
माण्डवी गाउँपालिका वडा नं. १ तिराम थक्लेनी घर भएका २ बर्षिय थारुप थापामगर आर्थिक अभावका कारण अस्पतालको बेडमा अचेत अबस्थामा लडिरहेका छन्। जिल्ला अस्पताल प्युठानमा भर्ना भएका थापामगरलाई मेनिन्जाइटिस भएको उनको उपचारमा संलग्न एम.डि.जि.पि डा. सुनिल सुनारले बताए। गाउँघरमा यो समस्यालाई दिमागको ज्वरो समेत भनिने उनले बताए । ४ दिन अगाडि बालकको आमा तिला देवि थापा मगरले उनलाई अस्पताल लिएर आएकी थिईन।
जिल्ला अस्पताल बिजुवारले जिल्लामा उपचार सम्भव नहुने भनेपछि उनी बिहिबार राती २ बजे अस्पतालबाट निस्केको र अहिले सम्म सम्पर्कमा नआएको बालकको कुरुवा बसेकी दीदी लक्ष्मी थापामगरले बताईन। डाक्टरले बाहिर लैजान भन्नभयो आमा टेन्सनले एकछिनमा आउँछु भनेको अहिले सम्म आउनु भएको छैन लक्ष्मीले भनिन्—“ म संग एक रुपैयाँ पनि छैन।” अब भाईको उपचार कसरी गर्ने,आँखाबाट आँसु झार्दै उनले भाईलाई बचाउनको लागि सबैलाई आग्रह गरिन्।
दुई बर्षिय बालकको बुवाको निधन भएको ८ महिना भयो। घरमा बालकको आमा , २४ र ६ बर्षिय दाजुहरु , १८ र ९ बर्षिय दीदीहरु छन्। परिवारमा एक जनाले मात्र कमाउने दाई कोभिड १९ का कारण भारतमा अलपत्र परेका छन्। बुवा बितेको बेलामा लागेको ऋण अझै तिर्न नसकेको लक्ष्मीले बताईन्। गाउँमा पनि ऋण दिदैनन् बाहिर जान डाक्टरले भनेपछि टेन्सनले आमा भागेर गएको हुन सक्ने उनले बताईन्।
बालकको निकै पिडादायी अबस्था देखेपछि उपचारमा सलंग्न डा. सुनिल सुनारले बालकको उपचारमा आवश्यक परेका औषधीहरु आफैले किनेको बताउँछन्। खाना खाने पैसा समेत नभएपछि बालकको दीदीलाई अस्पतालबाट निःशुल्क खानाको ब्यवस्था गरिएको छ। बालकको अवस्था जटिल बन्दै गएको भन्दै तत्कालै उपचार गर्नुपर्ने डा. सुनारले बताए। बालकको अबस्था देखेर आफैले औषधी किनेर उपचार गरेका सुनारले आवश्यक परेमा उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नु पर्ने भएकोले जिल्ला बाहिर लैजानु पर्ने डा. सुनारले जानकारी दिए। सबैले सक्दो सहयोग गरेर उनको उपचारमा सघाउन उनले सबैलाई आग्रह गरे।
भाद्र १२ देखी जिल्ला शिल हुने